धेरैको भाग्य बनाएका यी ‘भाग्य न्यौपाने’ को जिवनकहानी यस्तो छ (भिडियोसहित) « Light Nepal
धेरैको भाग्य बनाएका यी ‘भाग्य न्यौपाने’ को जिवनकहानी यस्तो छ (भिडियोसहित)
Published On : 13 March, 2019 10:53 am
काठमाडौं, फागुन २९ । भाग्य न्यौपाने एक संचारकर्मी जस्ले बाल गायक अशोक दर्जीलाई मिडियामा ल्याएर भाईरल बनाए । न्यौपानेले बिभिन्न कला, पेशामा आवद्ध ब्यक्तिहरुलाई मिडियामा ल्याएर उनिहरुका भित्री कुराहरुलाई बाहिर ल्याउने काम गर्छन् ।
झापाका न्यौपाने मिडियामा आएको छोटो समयमानै चर्चामा रहेका छन् । समाजमा देखिएका करिती, विकृति र नयाँ, नयाँ कला र प्रतिभालाई बाहिर ल्याएर सबैको मन जिन्त सफल न्यौपानेले बिशेष गरेर बालप्रतिभा र गरिवको बढि आवाजलाई बाहिर ल्याउने गर्छन । पढाईको शिलशिलामा बिदेश गएका न्यौपानेले स्वदेशमा फर्केर मिडियालाई रोजेका हुन् ।
आवाजबिहिनको आवाज बन्नु र असाहायलाई सहयोग गर्नु उनको पहिला काम देखिएको छ । सधै अरुलाई लिएर मिडियामा आउने न्यौपाने कमै आउछन् आफु पाहुना बनेर अन्तर्वाता दिन, पाहुना बनेर मिडियामा अन्तर्वाता दिन आउदा निकै खुशीपनि देखिएका छन् । उनि भन्छन् ‘मेरोे सानो प्रयासले कसैको जिवनमा परिवर्तन आउँछ भने म यस्तो काम सधै गर्छु, शहरमा भन्दा यस्ता प्रतिभाहरु गाउँमा हुन्छन् ।’
गीत गुनगुनाउने र गीत लेख्नेपनि गर्छन भाग्य न्यौपाने । आफुभित्र गोप्य कुरा केहिपनि नभएको उनको भनाई छ । आफ्नो यो पेशबाट परिवार , बुवाआमापनि निकै सन्तुष्ट बनेको उनको भनाई छ । धेरैको बिश्वास जितेका यी भाग्यसंग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्न तल क्लिक गर्नुस
नेपालमा आईरनमेन ल्याउने काे हुन जाेसिला यूवा ? कहिले आउदैछ !
दमक झापा । नेपालकै एक युवाले आईरनमेन सुट तयार गर्दैछन र उक्त सुट चाँडैंनै नेपालमा